Best mid-range smartphones of 2020 ﻿
Best mid-range smartphones of 2020
၂၀၂၀ ခုနှစ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး mid-range smartphone များ
သင့်အနေနဲ့ အလယ်အလတ်တန်းစား smartphone တစ်လုံးကို ဝယ်ယူဖို့အတွက် စိတ်ဝင်စားနေတယ် ဆိုရင်တော့ ဒီဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ရှုကြည့်လိုက်ပါ။ အောက်တွင် ၂၀၂၀ ခုနှစ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး mid-range smartphone များကို ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့ခေတ်တွင် ကောင်းမွန်စွာအသုံးပြု၍ရနိုင်တဲ့ smartphone တစ်လုံးကိုဝယ်ယူဖို့ဟာ ခက်ခဲတဲ့ အရာတစ်ခုမဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ iPhone တစ်လုံးထက် ဈေးထက်ဝက်လောက်သက်သာပြီး ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ smartphone တွေထဲကမှ ရွေးချယ်စရာတွေ များစွာရှိနေလို့ပါပဲ။ အဆိုပါ smartphone များထဲက သင်ကောင်းကောင်းအသုံးပြုနိုင်မယ့် အလယ်အလတ်တန်းစား smartphone အချို့နဲ့ သူတို့ရဲ့ဈေးနှုန်းများကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ပါဖုန်းများရဲ့ အမည်များကိုနှိပ်ပြီးနောက် သူတို့နဲ့သက်ဆိုင်ရာ website များတွင်လည်း အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
1. Google Pixel 4a (€– 349)
2. OnePlus Nord (€– 379)
3. iPhone SE (€ – 409)
4. Fairphone 3+ (€ – 425)
5. Xiaomi Mi Note 10 (€ – 410)
6. Samsung Galaxy M31 (€ – 245)
7. Moto G 5G Plus (€ – 300)
8. Samsung Galaxy A51 (€ – 298)